Zụta Trilostane ntụ ntụ (13647-35-3) hplc≥98% | AASraw
AASraw nọ na njikọ na ike imepụta site na gram ruo n'usoro nke Trilostane Powder (13647-35-3), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na njikwa njikwa njiri ike.
nchekwa: Mmiri, ọchịchịrị na 0 - 4 C maka obere oge (ụbọchị ruo izu) ma ọ bụ -20 C maka ogologo oge (ọnwa ruo afọ).
Trilostane ntụ ntụ bụ ihe mgbochi nke 3β-hydroxysteroid dehydrogenase eji mee ihe na ọgwụgwọ nke ọrịa Cushing na hyperaldosteronism bụ isi. Ndị a bụ nsogbu abụọ ebe amịrị homonụ corticosteroid dị ukwuu n'ahụ. Corticosteroids dị mkpa maka ahụ maka iji carbohydrates, abụba na protein ya maka nzaghachi nkịtị maka nrụgide. Ha dịkwa mkpa maka nhazi nke nnu na nguzo mmiri na ahụ. Trilostane ntụ ntụ na-enyere aka igbochi mmepụta corticosteroids, na-achịkwa mgbaàmà ndị metụtara nsogbu ndị a.
Anabatara na nso nso a na 2008 maka ọgwụgwọ nke ọrịa Cushing (hyperandrenocorticism) na nkịta. Ọ bụkwa ọgwụ izizi akwadoro ịgwọ ndị Cushing ma ọ bụ nke pituitary na nke adrenal. Ọgwụ a na-ede ọgwụ na-arụ ọrụ site na ịkwụsị mmepụta nke cortisol na gland adrenal.